Wakiilka Cristiano Ronaldo oo ka hadlay wararka Weeraryahanka Juventus la xiriirinaya Kooxda Sporting Lisbon – Gool FM
(Turin) 15 Maajo 2021. Wakiilka Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay wararka Weeraryahanka Juventus la xiriirinaya inuu dib ugu laaban doono Kooxda Sporting Lisbon.
Cristiano Ronaldo ayaan dib ugu laaban doonin Sporting Lisbon xagaagan, inkastoo ay kooxdu ay hanatay horyaalkeedii ugu horreeyay muddo 19 sano ah.
Warar dhowaan soo baxayay ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo oo la hubin mustaqbalkiisa kooxda Juventus uu dib ugu laaban doono kooxdiisii ugu horreysay ee Lisbon oo uu ciyaarihiisa ka soo bilaabay.
Ronaldo ayaa qandaraaskiisa Juventus waxa uu ku eg yahay xagaaga 2022-ka, waxaana la soo jeediyey in kooxda ay dooneyso inay lacag kaash ah ku hesho sanadkan halkii uu kaga tagi lahaa beeca xorta ah.
Kooxda reer Talyaani sidoo kale waa inay yareeyaan mushaharkiisa, haddii ay doonayaan inay dib u cusbooneysiiyaan shaxdooda, rajada ay ka qabaan inay seegaan Champions League xilli ciyaareedka soo socda ayaa sii kordhisay suurtagalnimada iibka Weeraryahankan.
Hadalkaas ayaa si weyn u kordhay kaddib markii 36-sano jirkaan hooyadiis Dolores Aveiro ay ka sharraxday dabaaldegga hanashada horyaalka ee Kooxda Lisbon: “Waan la hadli doonaa si aan u soo celiyo, sanadka soo socda wuxuu ka ciyaari doonaa Alvalade [Guriga Sporting].”
Dolores waxa ay rajaynaysay in markale wiilkeeda uu dib ugu soo laaban doono kooxda Sporting ka hor inta uusan ciyaaraha ka farriisan, laakiin uma muuqato inay arrintaasi dhici doonto xilli ciyaareedka soo socda.
Wakiilka ciyaaryahan Ronaldo ninka la yiraahdo Jorge Mendes ayaa ka hadlay wararka Weeraryahankan la xiriirinaya inuu dib ugu laaban doono Portugal xilli ciyaareedka soo socda, inkastoo uu ku faano horyaalkii uu kula guuleystay sanadkii 2002.
Mendes ayaa u sheegay Record: “Cristiano xaqiiqdii wuu ku faanaa horyaalkii uu kula guuleysatay Sporting, sida uu si cad u soo bandhigay, laakiin waqtigaan la joogo qorshayaashiisa shaqo kuma jiraan inuu dib ugu laabto Portugal.”
Ronaldo ayaa shan gool u dhaliyey 31 kulan oo uu u saftay Sporting xilli ciyaareedkii 2002-03, ka hor inta uusan ku biiri Kooxda Manchester United, halkaasoo uu ku noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican Adduunka.
Marcus Rashford oo doortay Shaxdiisa Riyada Lix geesoodka ah ee ugu fiican Manchester United... (Miyuu isagu ku jiraa? Yuuse doortay Van der Sar iyo De Gea?)